Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay geerida Majaajiliiste Abwaan Sooraan – Banaadir Times
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay geerida Majaajiliiste Abwaan Sooraan
By banaadir 26th May 2021 51 No comment
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay geeriday Majaajiliiste Abwaan Sooraan Ismaaciil Sugule oo ka mid ahaa jilayaasha caanka ah, kaas oo ku geeriyooday magaalada Burco.
Eebbe ha u naxariisto Hal abuurkii, fannaankii iyo jilaagii weynaa ee Sooraan Ismaaciil Sugulle oo ku geeriyooday Burco, Sooraan waxa uu ka mid ahaa hal abuurrada sida weyn uga qeyb qaatay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed fankiisa iyo sheekooyinkiisuna ahaayeen kuwo farriin xambaarsan..
Jannadii Firdows Allaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna samir iyo iimaan Allaha ka siiyo.
Dhinac kale Wasiirka Warfaafinta XFS Cismaan Obokor Dubbe ayaa ka tacsiyadeeyay geerida marxuumka.
“Ilaahay ha u naxariisto waxa goor dhoweyd Magaalada Burco ku geeryooday fannaankii, hal abuurkii iyo jilaagii hal-doorka ahaa ee Sooraan Ismaaciil Sugulle. Waxan ka tacsidaynaa ehelkiisii, qaraabadii iyo bahda fanka Soomaaliyeed oo uu muddo dheer ka tirsanaa. Ilaahay ha u naxariisto Sooraan” ayuu yiri wasiir Dubbe.
Madaxda dowlad goboleedyada oo kulamo kala duwan ka wada Muqdisho
Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi Garabka Cabdi Xaashi oo kasoo horjeestay heshiiska doorashada ee la saxiixayo
Gabar Soomaali ah oo qaab aad loola yaabay loogu dilay magaalada Mombassa
By banaadir 14th June 2021
Madaxweynaha Puntland Saciid Dani “Marxalad adag ayuu marayaa Dalka Wali”
By banaadir 4th June 2021
By banaadir 24th May 2021